मन्‍त्रीले भैसी दुहेपछि…
सामान्यतया कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको काम रिवन कोट्ने, बत्ती बाल्ने र भाषण गर्ने हुन्छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारकी एक मन्त्रीले भने सार्वजनिक कार्यक्रममै भैसीको दुध दुहेएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी छन्।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बुधबार एक कार्यक्रममा भैसीको दुध दुहेर कार्यक्रममो शुभारम्भ गरेकी हुन्। वीरेन्द्रनगर–१ बाङ्गेसिमलका दलित समुदायलाई भैसीपालन वितरण गर्न पुगेकी मन्त्री केसीले कार्यक्रम स्थलमै दुध दुहुएकी हुन्।
मन्त्रालयको ५० लाख खर्चिएर किनेका भैसी गोलाप्रथा गरी कृषकलाई वितरण गरिएको हो। भाग्यमानी एक कृषकले भने दुहुनो भैसी पाएका थिए।
दलित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरर्गत ५० घरधुरीलाई भैसी वितरण गरेको हो। भैसी हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री केसीले अनुदानको सही सदुपयोग गरेर जीविकोपार्जन सुधार ल्याउन आग्रह गरिन्।
मन्त्रालयको ५० लाख खर्चिएर किनेका भैसी गोलाप्रथा गरी कृषकलाई वितरण गरिएको हो। भाग्यमानी एक कृषकले भने दुहुनो भैसी पाएका थिए। भैसी पाएपछि स्थानीय रामकला सार्कीले आर्थिक घरखर्ज चलाउन सहज हुने बताइन्।
प्रकाशित मिति June 7, 2019
फोटो खिच्नै लाग्दा सुन्दरी राकुल प्रीतको ड्रेस हावाले उडाइदिएपछि.. हेराैँ तस्बिरहरू
‘राष्ट्रिय भाउजु’ स्वस्तिमाको सुन्दरता, हेराैँ १५ तस्बिर
नायिका स्वस्तिमा खड्काको ‘रेट’ कति ?
ब्रेकअपपछि राजकुमारी अवतारमा साम्राज्ञीको हटपोज (फोटो फिचर)
चल्यो दोस्रो बिहेको लहरः श्वेता र अन्जुपछि रीमा पनि बिहे गर्ने मुडमा ?
‘साथ निभाना साथिया’की संस्कारी बुहारी गोपी कती धेरै हट ? हेराैँ १२ तस्बिर
सानबुवा र भतिजी ‘रंगे-हात’ भेटिएपछि … (भिडियो)